Taxanaha 2070 Dragon® Dredge - Ellicott Dredges
Taxanaha 2070 Dragon® Dredge
Soo dejiso Xaashi Gaar ah
Taxanaha 2070 Dragon® cutterhead dredge waa naqshada ugu casrisan ee loo yaqaan '20' naqshadeynta adduunka ee ka kooban Ellicott farsamooyinka naqshadaha caanka ah ee adduunka. Tan dredge la qaadi karo waxaa lagu geyn karaa gaari xamuul ah meelaha gudaha ah waxayna awood u leedahay inay qodo ilaa 50 ′ (15 m) taas oo u oggolaaneysa in qodku uu ku shaqeeyo marinnada waaweyn ee maraakiibta. Hull iyo sagxadda guriga waxaa loogu talagalay Bureau of Veritas (BV) Shuruucda Biyaha Lagu Xannaaneeyo oo sida tan oo kale ah waxay ku habboon tahay dalabyo kala duwan oo ay ka mid yihiin harraad qulqulaya, daadinta wabiga dib u soo celinta dhulka, iyo macdanta ciidda mashaariicda.
2070 HALIS UGU DANBEEYA
Laba matoor oo kala gooni ah oo si madax-bannaan u shaqeeya si ay u kaxeeyaan mashiinka mishiinka iyo matoorka. Tani waxay u oggolaanaysaa awood hawo-buuxa leh oo ah mashiinka wax gooya iyo wiishka xitaa marka RPM-yada ay ku yareeyaan mashiinka-wax mashiinnada kaliya aysan qaban karin.
Nidaamka Haydarooliga waxaa loogu talagalay iyadoo diirada la saarayo waxtarka, taasoo keentay hoos u dhaca isticmaalka shidaalka iyo waxqabadka nidaamyada qodaalka oo sareeya
Qiyaasta dheecaanka: 20 ″ x 20 ″ (500 mm x 500 mm)
Matooraha Main Caterpillar Marine C-32: 1,300 HP (969 kW)
Qalab Mishiinka Kaabayaasha C-15: 440 HP (328 kW)
Awoodda Quwada - Quwada: 250 HP (186 kW)
Qoto Dheerida Ugu Badan: 50 ′ (15 m)
XULASHADA FURAHA GUUD
Barroosinka ayaa soo kiciyey
Waalka gargaarka nuugista
Jib wiish ka badan bamka
Dabka la qaadan karo iyo bamka wax lagu shubo
Fursado dheeraad ah ayaa la heli karaa markii la codsado